Isu socodka gaadiidka Puntland iyo Somaliland oo dib loo furay | Universal Somali TV
Isu socodka gaadiidka Puntland iyo Somaliland oo dib loo furay
Maamulka Puntland ayaa sheegay in dib uu u furay isu socodka dhanka gaadiidka Puntland iyo Somaliland, kadib 24-saac oo uu xayirnaa isu socodka.
Shalay gelinkii dambe Guddoomiye Cumar Faraweyne wuxuu sheegay in xayiraadii isu socodka la qaaday, hadana ay isku socon karaan shacabka labada dhinac.
Wuxuu sheegay dhinacyo badan iyaga oo wax ka eegaya in ay ka laabteen go’aankoodii hore, oo ay ka mid yihiin in ay u turaan shacabka Soomaaliyeed, ee isticmaalaya wadada xiriirisa Laas-caanood iyo Garowe.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Guddoomiyaha Gobolka Nugaal Cumar Faraweyne go’aankii hore inuu ka laabto, ay ka dambeysay Madaxtooyada Puntland oo ku cadaadisay in aysan dhaqan geli karin xayiraada.
Xiisadda u dhaxeysa Somaliland iyo Puntland ayaa ka dhalatay Safarkii dhawaan Wasiirka Qorsheynta Dowladda Dhexe uu ku tagay deegaano ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag, taasi oo sababtay in labada maamul uu dagaal ku dhexmaro degaanka Tukaraq, halkaasi oo uu ka dhashay dagaal sababay khasaare kala duwan.
Kan-xigaDhalinyaro Somaliyed oo laga sii daay...
Kan-horeMadaxweyne Farmaajo oo la filaayo maa...
40,587,012 unique visits